Okuncane Chalkidiki: libuyekeza Greece abalandeli
Kukhona indawo eyodwa eGreece, kusukela lapho uhamba abanolwazi kakhulu ukuncoma ukuqala ajwayelane lizwe. Lokhu Halkidiki. Ukubukeza ejwayelekile izivakashi Russian ku resort, njengoba umthetho, uthi konke lapha kuyinto okusikhumbuza yezwe lenkaba yawo, futhi umqondo ocacile izwi. Ikhaya induduzo, abantu lovely, ulwandle langa nezinjabulo okulula ukuphila. Nokho, tour opharetha ngokuvamile ukunikela isinqumo esinjalo elilinganiselwe amahhotela ubonisa ukuthi inani elandayo labantu ukuza lapha bebodwa. Kulula futhi enenzuzo more. Ngakho, ake sixoxe Halkidiki.
Uphenyo imininingwane resort
amaholide Abaningi agcwele izindawo zendawo njengoba litheku ukuphumula ephelele futhi wehlise umoya. Angifuni lutho ukwenza, indawo lapho engaya khona edonsa. Kukhona kuphela isifiso sokuba ngokuphelele sehlulwe lokhu okuthuleyo ebhishi-sibhedlela amnandi. Bheka kwelanga zinkulu, donsa uphuzo iphunga zemithi zikaphayini. okuhle ikakhulukazi Halkidiki ngo-September. Izibuyekezo bathi ehlobo Indian kule ndawo yeholide akuyona kuphela kujabulise kakhulu, kodwa noma kunjalo hhayi njengoba penny kuhle. Ukushisa abates nabantu uqale ukuhlakazeka. Kodwa sezulu Chalkidiki kuyinto enhle ngasiphi isikhathi sonyaka. Nini kwelanga, kanjalo ukushisa kwehlobo lapha ngakho-ke engazizwa njengoba kwezinye izindawo eGreece. Futhi lapho Umoya ushaya cool, nakhu cishe azinakwa. Ngenxa yokuthi abantu abaningi bakhetha ukuba beze Halkidiki.
Ukubuyekezwa "iminwe emibili" yinto
Ngakho ngokuthi promontories oyinhloko phakathi kwezingane ezisabalele lonke sezwe evundile - Sithonia futhi Cassandra. Abanye abantu abafana lapha baningi ngisho nangaphezu kwezinwele eKrethe. Phela, ulahleke zezindela entabeni nemizana, it is hhayi okuhloswe ngaso izivakashi kodwa akukho ngaphansi ezikhangayo. Futhi kuyini okuphansi kwesandla sakho ukhulume ezintabeni oluhlaza aluhlaza, amabhishi esekusithekeni nasemathekwini emangalisa! Okuhamba phambili kwe-kolwandle, ngokuvumelana Ezivamile the resort, kuba Yiqiniso, Sithonia. Amanzi ahlanzeke kangangokuthi ngisho licwebezele elangeni. Kodwa-ke has abalandeli ayo kwezinye amatheku. Ukuze ukwazi konke, ride on "umunwe" kwesinye, futhi wenze isinqumo sakho, qiniseka ukuthi ukuqasha imoto. Phela, impilo engcono e Kassandra, futhi uphumule Sithonia. Futhi kangcono ukuthatha amahhotela kuphela ibhulakufesi, kanye enenzuzo kakhulu - ukuhlala. Bona konke okuhle endleleni. Khona-ke uvula izintelezi imfihlo Halkidiki.
Izibuyekezo ikhambo cuisine
Abeza lapha isikhathi eside, basalokhu bengakakwazi ukujabulela ngokugcwele iholide nabantu lapha bathi inyanga lapha angaliboni, injengosuku lunye. Oh futhi uma ubheka, futhi kusadingeka isifiso ukushintsha isimo, ezinye Halkidiki kuyinto elula ukwenza waya zezindela abadumile kweNtaba Athos, meteora - futhi ezinye ezikhangayo. Izivakashi eziningi bayajabula ne cuisine Halkidiki. Greece, ukubuyekezwa okuyizinto ugcwele indumiso for izitsha Mediterranean, idume ukudla okuhle. ezinhle kulesi sici, taverna ngasolwandle futhi maqhugwane yobuhlanga emizaneni entabeni Ikakhulukazi. Izivakashi ku imoto e-amatheku zezindela futhi ejabulela ikwazi ukuhamba ngenkululeko, ukubonile lokhu kokuhlangenwe nakho kwawo siqu, futhi welulekwa ukuba uvakashele izindawo ezifana nezinye.
Indawo egcina amagugu esizwe zamaqhawe e Pereslavl. Eminyuziyamu Pereslavl
Esishintshashintshayo okungavamile nasezindaweni ezizungeze eMoscow
I izindiza ephephe kunayo yonke emhlabeni. Isilinganiselwa for 2016
Nezokungcebeleka isikhungo "Manor Volzhina"
"Titan Gel": Izibuyekezo yangempela ikhasimende
Thenga izingubo Wezingane esitolo. Izinzuzo shopping Inthanethi
Indlela ukulungiselela ukutshala anyanisi? Anyanisi: zokutshala nokunakekela
Indlela ukubuka ikhasi izibalo "VKontakte": imiyalelo enemininingwane
A igolide isongo ngomlenze wakhe ukuze sihambisane izikhathi